Yedu Makiriniki uye Vabatsiri - Vondt.net
fibromyalgiaZvinyorwa nezveFibromyalgia Fibromyalgia chirwere chisingaperi chinorwadza icho chinowanzo kupa hwaro hwehuwandu hwezviratidzo zvakasiyana nezviratidzo zvekiriniki. Pano iwe unogona kuverenga zvimwe pamusoro pezvakasiyana zvinyorwa zvatakanyora nezvechirwere chisingaperi chinorwadza fibromyalgia - uye kwete zvirinani kuti ndeapi marapiro uye matanho epamoyo aripo ekuongororwa uku. Fibromyalgia inozivikanwawo seyakapfava tishu rheumatism. Mamiriro acho anogona kukonzera zviratidzo zvakadai sekurwadziwa kusingaperi mumhasuru nemajoini, kuneta uye kushushikana.
Kudya uye ChikafuUnofarira zvinokonzerwa nekudya pane hutano hwako? Pano iwe unowana zvinyorwa mune echikamu chekudya uye chikafu. Nekudya isu tinosanganisira zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakubika zvakajairika, miriwo, zvisikwa zvisikwa, zvinwiwa uye zvimwe zvinwiwa.
Kurovedza muviri uye kurovedza muviri
Makiriniki Edu uye Partner
- Chiono chedu? Isu Tinogara Tichishanda Kuti Tive Iyo Yakanakisa Veruzhinji Yakabvumidzwa Utano Hwehutano PaMhasuru, Tendons Uye Majoini
VondtKlinikkene inyanzvi inogara ichikura network yemakiriniki ine chishuwo chekugaro iine hunyanzvi hwepamusoro mukuongorora, kurapwa uye kudzidziswa. Mune zvakarongwa pazasi iwe unowana rumwe ruzivo nezve edu akabatana makiriniki, pamwe nevatinoshanda navo. Chiono chedu ndechekuti iwe unzwe uine chivimbo chekuti urikuwana akanakisa murwere ruzivo rwunopihwa nevekunzvimbo dzakabvumidzwa nevanoona nezvehutano nyanzvi nehunyanzvi hunyanzvi mumhasuru, tendon uye majoini.
Lambertseter: Lambertseter Chiropractor Center uye Physiotherapy
Eidsvoll: Eidsvoll Healthy Chiropractor Center uye Physiotherapy
Gedhi reWergelands 5, 2080 Eidsvoll (Sundet)
Eidsvoll: Råholt Chiropractor Center uye Physiotherapy
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Alexander Andorff. Mvumo chiropractor uye biomechanical rehabilitation Therapist.
Ini ndiri mupepeti-in-mukuru weVondt.net uye Vondtklinikkene - uye shanda ku Lambertseter Chiropractor Center uye Physiotherapy. Sekubatana kwemazuva ano kwekutanga mune musculoskeletal kusagadzikana, zvinofadza chaiko kubatsira varwere kuti vadzokere kuhupenyu hwezuva nezuva huri nani.
Chidzidzo chakazara uye nzira yemazuva ano yekurapa ndiyo yakakosha tsika dzePain Clinics - uye vedu vatinoshanda navo. Isu tinoshanda padhuze navanachiremba vezvechiremba nemaGPs kuti tiwedzere mhedzisiro. Neiyi nzira, isu tinogona kupa vazhinji kunyange zvirinani uye zvakachengeteka murwere ruzivo. Yedu yakakosha tsika ine mana makuru mapoinzi:
Yemazuva ano, Hufakazi-Hwakavakirwa Kurapa
Mwoyo Murefu Mukutarisa - Nguva Dzose
Mhedzisiro Kuburikidza neKukwikwidza Kwakakwirira
Tine vanopfuura 85000 vateveri pasocial media, pamwe nevashanyi vanosvika mamirioni gumi nemashanu pagore (kubva munaKurume 15), hazvishamise kune vazhinji kuti tinopindura zuva nezuva kumibvunzo pamusoro pevanorapirwa vanokurudzirwa munyika yose kana zvakaoma munzvimbo. svika kwatiri. Nguva nenguva tinogamuchira mibvunzo yakawanda zvekuti zvinogona kunetsa kuipindura yese, uye ndizvo chaizvo chikonzero nei takagadzira chikamu ichi - apo patinozoenda zvishoma nezvishoma, kuwedzera kumakiriniki edu akabatana, kuwedzera mazano edu mukati medzakakurudzirwa pachena mvumo yevashandi vehutano munzvimbo yako iripedyo.
Murwere: Bhuku Nguva Yetsandanyama Yako uye Majoini Zvirwere?
Kana iwe uchida kuverenga zvakawanda pamusoro pemakiriniki kana kunyorera musangano, unogona kubaya pane zvinongedzo zviri pamusoro. Kusarudzwa kunoitwa pane akasiyana mawebhusaiti emakiriniki. Inzwa wakasununguka kutaura nesu kana iwe uine mibvunzo kana zvimwe zvakadaro.
Physiotherapist kana Chiropractor: Shanda nesu?
Makiriniki edu anogona kunongedzera kukubatana kwakanaka munharaunda, mazita evarwere akabatikana, mikana yakanaka yekuwana mihoro uye chikuva chikuru chekudzidza. Tinogara tichitsvaga nyanzvi dzine hunyanzvi - uye kazhinji tine mikana kunyangwe isu kazhinji tisingade kutumira zvinzvimbo nekuda kwevanhu vanonyorera vasina kukumbirwa. Makiriniki ekurwadziwa ane tarisiro yakakosha pachiropractic yemazuva ano uye physiotherapy, asi isu tinofarirawo zvakanyanya kunzwa kubva naprapaths, osteopaths uye masseurs. Kuti ubate nesu, tinokumbira kuti utumire meseji yakananga kune imwe yemakiriniki ari pamusoro. Tinotarisira kunzwa kubva kwamuri.
Vondt.net inzvimbo yehutano yeVondt Clinics pane musculoskeletal kusagadzikana kunofambiswa nevatambi vane hutano hwakabvumidzwa.
Wound Clinics inyanzvi yetiweki, ine vateveri vanopfuura mazana matanhatu ezviuru, yemakiriniki vane hunyanzvi mukusuwa kwemasculoskeletal. Iwe unogona kuwana imwe yemakiriniki edu kana kiriniki yakakurudzirwa iri pedyo newe pasi pe "GADZA A CLINIC" link.
Iwe unoda kuongororwa here uye kubatsirwa nemarwadzo ako? Dhinda pano kuona maclinic edu akabatana uye vatinoshanda navo.
nezvipoka Sarudza chikamu Zvimwewo kurapwa Annet Osteoarthritis (Osteoarthritis) Autoimmune syrup mabatiro Chirungu ergonomics fibromyalgia tsvakurudzo rutsoka Physiotherapy General muenzi Post chiningoningo Hutano inishuwarenzi Mwoyo uye chirwere chevascular Musoro hudyu Mamiriro Eganda Chiropractic ibvi Kudya uye Chikafu Supplements Kurwadziwa kusingaperi Kupera simba kuneta / ME unhu Articles Reader Mubvunzo Mushonga Muswe uye Skeleton mutsipa tsinga zvirwere Kurovedza muviri uye kurovedza muviri rheumatism Kudzoka zvirwere simba Exercises Dziziness uye Crystal chirwere Zvirwere uye Kuongororwa Munotatamura Exercises kudzidza Uncategorized Kuneta uye Kuneta
© Copyright - Vondt.com